Ukubumba - iMestech Industrial Limited
Umngundo (ukungunda) kunye nokufa zizixhobo zokwenza into engenanto okanye ekrwada ukuba ibe ngamacandelo anobume obuthile kunye nobukhulu phantsi kwesenzo samandla angaphandle. Esi sixhobo senziwe ngamalungu ahlukeneyo, kwaye ukungunda okungafaniyo kwenziwa ngamalungu ahlukeneyo. Kukuqhubekeka okutshintsha ikakhulu imeko yomzimba wezinto ukufezekisa ukumila kwento. Umngundo kunye nokufa zizixhobo zemveliso ngobuninzi. Ukusetyenziswa sokubumba kuphucula kakhulu ukusebenza imveliso kunye nokuphindaphinda nokuchaneka lokuvelisa iindawo. Yaziwa njenge "mama weshishini".
Umngundo kunye nokufa kunokuhlulwa ngokweendidi ezimbini ngokweempawu zazo zokusebenza
1.I-die: ukusetyenziswa kobume obunqamlezileyo kunokwenza ukwahlula okuqinileyo okungenanto (ukungabinanto) ngokungqinelana nemilo yokujikeleza, okanye ukugoba i-extrusion molding. Olu hlobo lokufa lusetyenziselwa ukungabinanto, ukusweleka, ukubanda isihloko kunye nokukhutshwa kwamalungu.
2.Umngundo: izinto zekolloidal okanye izinto ezingamanzi zifakwa ngaphakathi kwisikhunta sokubumba, okanye izinto eziqinileyo ziyanyibilika kwisibumbeko, zizaliswe kwaye zipholile ukufumana iimveliso ezinobume obufanayo nobumngundo. Olu hlobo lwesikhunta lisetyenziswa kwiindawo zeplastiki ekubumbeni ngenaliti, ekubumbeni i-silica gel, isinyithi sokufa kwesinyithi. Ngokubanzi ngaphandle komkhwa, sihlela ukufa ngenxa yesinyithi esingenantsimbi njenge-aluminium alloy kunye ne-zinc alloy
Inaliti nokuvunda iinxalenye zeemoto
HASCO ngenaliti ngumngundo
Ngokwezixhobo zeemveliso eziveliswa kukungunda, ukungunda kwahlulwe kwaba:
isinyithi sokubumba, ukungunda kweplastiki, kunye nokungunda kwe-pecial.
1.Metal sokubumbela: kubandakanya bexhentsa die (ezifana blanking die, ukugoba die, ukuzoba die, flanging die, shrinkage die, undulating die, bulging die, ekubumbeni die, njalo njalo) njl. njl.), extrusion die, die die cast, die forging die, njl;
Umngundo we-2.Nonmetal wohlulwe waba: ngumngundo weplastikhi, umngundo ongaphili ngesinyithi, umngundo wesanti, umngundo we-vacuum kunye neparafini. Phakathi kwabo, kunye nophuhliso olukhawulezayo iiplastikhi Polymer, ngumngundo zeplastiki ngokusondeleyo ezinxulumene nobomi babantu. Umngundo weplastiki unokwahlulwa ngokubanzi ube: ngumngundo wenaliti yokubumba, i-extrusion yokubumba, irhasi incediswe ngumngundo, njl
Ukuvunda kunye nokufa kunendlela ethile okanye imilo, kwaye akukho nto inokuhlulwa (ingenanto) ngokokuma kobume bendawo ngokusebenzisa imilo yentsimbi. Ngokusebenzisa imilo kwisisu lwangaphakathi, ezingenanto ukufumana imilo ehambelana-ntathu. Ukufa ngokubanzi kubandakanya iinxalenye ezimbini: ukushukuma kokufa kunye nokufa okungagungqiyo (okanye ukubetha ngenqindi kunye nokufa), okunokuhlulwa kwaye kuvalwe. Amalungu athatyathwa xa ezahlulwe, kwaye oku kungenanto kutofelwe kumngxunya wokufa ukuze wenziwe xa kuvaliwe.
Kukho amanqanaba amathathu kwimveliso yokubumba: uyilo olungu-1; Processing 2.mold; 3.Ukwamkela ukungunda
IMestech ibonelela abathengi ngoyilo lweenxalenye zeplastiki kunye nezahlulo zesinyithi, ukwenziwa kwenaliti yokubumba, ukufa komntu ekubunjweni komngundo kunye nokuvalwa komngundo. Kunye nokusetyenziswa komngundo kwimveliso yobuninzi beplastiki, iinxalenye zesinyithi. Sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe ukubonelela ngemveliso yokubumba kunye neplastiki, imveliso yentsimbi kunye neenkonzo.